Jawaahir Axmed Cilmi oo noqotay haweeneydii labaad oo ku guuleysata Kursiga Aqalka sare ee Galmudug – STAR FM SOMALIA
Jawaahir Axmed Cilmi oo noqotay haweeneydii labaad oo ku guuleysata Kursiga Aqalka sare ee Galmudug
Jawaahir Axmed Cilmi ayaa ku guuleystay doorashada kursiga Aqalka sare ee Galmudug, kaddib markii ay ka adkaatay Xildhibaan C/samad Macalin Maxamuud oo xilkan aad loogu saadaalinayay.
Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa u codeeyay Jawaahir Axmed Cilmi oo codka kaga guuleystay Xildhibaan C/samad Macalin Maxamuud oo horay u ahaan jiray Wasiirkii Arrimaha Gudaha.
Tartanka Kursiga Aqalka sare ee Beesha Cayr ayaa ahaa kan ugu adag ee ay ku loolamayeen saddex Musharax, waxaana uu la mid ahaa Kursiga Beesha reer Xaaji Saleebaan oo uu shalay ku guuleystay Abshir Bukhaari.
Jawaahir Axmed Cilmi ayaa noqoneysa haweeneydii labaad ee loo doorta Aqalka sare, waana xubintii 6aad xubnaha Aqalka sare ee ka imaanaya Galmudug oo lagu doortay magaalada Cadaado, xubintii u horeysay ee haween ee Aqalka sare ku soo baxday ayaa noqotay Zamzam Dahir Maxamuud.
Waxaa muuqata in xubnaha ku soo baxay illaa iyo hada Kuraasta Aqalka sare ee Galmudug ay u janjeeraan dhinaca Madaxweyne Xasan Sheekh oo juhdi badan gelinaya sidii Xildhibaano isaga taageersan ay ugu soo bixi lahaayeen Labada Aqal ee Baarlamaanka.
Waxaa iyana la filayaa in labada xubnood kale ee Aqalka sare Galmudug la doorto, si ay tirada ugu buuxsanto 8 xubin.
Labada kursi ee ka harsan xubnaha Aqalka sare ee Galmudug ayaa waxay kala yihiin Kursiga Beelaha Dir iyo Mareexaan.
Xubnaha Aqalka sare ayaa ka kooban 54 xubnood, Maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa min 11 xubnood helaya, halka Maamulada kala ah Koofur Galbeed, galmudug, Jubbaland, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay min 8 xubnood helayaan.
Cabdi Waaxid Cilmi Goonjex oo ku guuleystay Doorashada Aqalka Sare ee Galmudug
Xubnaha ka haray Aqalka sare ee Galmudug oo maanta lagu dooranayo Cadaado